Soo dejisan WinSCP 5.9.2 Standard iyo Portable – Vessoft
Soo dejisan WinSCP
WinSCP – software ah si ay u bixiyaan koobiyeynta la-hubo ee files u dhexeeya your computer iyo server in ay taageeraan SFTP iyo SCP Sharciyada qoran. Software waxuu si ay u abuuraan oo Customize sifooyinka fayl, dejisan iyo geliyaan faylasha, la abuuro xiriir calaamad ama tuuryo iwm WinSCP ku jira editor ka dhisay-in qoraalka oo u saamaxaya in ay saxaa files text maxalliga ah iyo kuwa fog. Is-of software waxaa lagu sameeyaa ayadoo la marayo hab of qoraallo iyo line amarka. WinSCP sidoo kale ku jira laba nooc oo interfaces garaafyada u saldhigyo kuwaas oo lagu fuliyay iyadoo la isticmaalayo tiro xuduudaheedu.
Koobiyeynta faylasha Secure
Taageer hawlgallada file aasaasiga ah
Waxaa la dhisay-in editor qoraalka
Laba nooc oo interfaces garaafyada
Comments on WinSCP:
WinSCP Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Total Commander 8.52a
العربية, English, Français, Español... Stellar Phoenix Windows Data Recovery - Home 6.0.0.1